Tag: definition of marketing analytics
Gịnị bụ nchịkọta? Ndepụta Teknụzụ Analytics Teknụzụ
Oge ụfọdụ anyị kwesịrị ịlaghachi n’ihe ndị bụ isi ma chee maka teknụzụ ndị a na otu ha ga-esi nyere anyị aka. Nchịkọta na ọkwa kachasị dị na ya bụ ozi sitere na nyocha usoro nke data. Anyị atụlela okwu nyocha maka ọtụtụ afọ ugbu a mana oge ụfọdụ ọ dị mma ịlaghachi na isi. Nkọwa nke nchịkọta ahịa ịre ahịa ahịa gụnyere usoro na teknụzụ nke na-enyere ndị ahịa aka ịtụle ihe ịga nke ọma nke atụmatụ ahịa ha.